Gmail ကိုလုံခြုံစိတ်ချရစေဖို့ နည်းလမ်းများ
Internet Journal Vol.18 ,No.10 , March 6,2017   Written By Aung Pye Phyo.
Gmail သည် E-mail အသုံးပြုသူများအကြားတွင် ရေပန်းစား အသုံးများခဲ့သည်မှာ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် အသီးသီးတွင်သာမက Personal mail များအဖြစ် Gmail ကိုတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံး ပြုနေကြခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ လုံခြုံမှုအတွက်လည်း အစီအမံများစွာ ရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ ထိုသို့အစီအမံများစွာထဲမှ အသုံးပြုသူများအတွက် အဆင်ပြေသင့်တော်မည့် လုံခြုံရေး နည်းလမ်း များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။
အသုံးပြုသူတိုင်း မဖြစ်မနေပြုလုပ်ထားသင့်သည်မှာ မိမိ Account ၏ Password လုံခြုံမှုနှင့် ကြံ့ခိုင်စေမှု ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်အပတ်များတွင် Password Security နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အ လက်များကို ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်သလို ယခု Gmail အသုံးပြုသူများအတွက် Password Security ပိုင်းများတွင်လည်း ထိုနည်းတူပင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် သိရှိထားသင့်သည်မှာ Gmail password သည် Google Account Password ပင်ဖြစ်ပြီး Google မှပေးထားသည့် များပြားလှသော ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက် လွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ Password တစ်ခု Strong ဖြစ်စေရန် အနည်းဆုံး Capital Letter ၊ Number ၊ Special Characters များပါဝင်သင့်ပါသည်။
၎င်းအပြင် မိမိ၏ Gmail Password သည် အခြားနေရာများတွင် အသုံးပြုခြင်းမရှိသော Password ဖြစ်ရန်လိုပြီး ရန်ဖန်ရန်ခါ ပြောင်းလဲပေးရန်လိုပါသည်။ ထိုသို့သောပြုလုပ်ခြင်းများအတွက် Reset နှင့် Recovery Options များကိုလည်း မှန်ကန်အောင်လုပ်ဆောင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဦးစွာ Password ကို ပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက် Account Setting ထဲသို့သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။
၎င်းနောက် Sign-in & Security ထဲသို့ထပ်မံသွားရောက်ရမည်။ထိုအခါတွင် Password & Sign-in Method ကိုမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းတွင် Password ပြောင်းလဲခဲ့သည့် နောက်ဆုံး ရက်စွဲကိုဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲလိုပါက ၎င်းကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအောက်တွင် 2-Step Verification ကဏ္ဍပါရှိပြီး Account ကိုပိုမို လုံခြုံစိတ်ချစွာအသုံးပြုလိုသူများအတွက် စီစဉ်ထားနိုင်သည့်နေရာဖြစ်ပါသည်။ Account Recovery Options တွင် မိမိအတွက် အရံ E-mail ထားရှိထားရန်လိုအပ်ပြီး Phone No. ကိုထည့်သွင်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
2.2Steps Verification အသုံးပြုသူအနေဖြင့် မိမိ၏ E-mail ကိုပိုမို၍ လုံခြုံစိတ်ချစေလိုလျှင်2Step Verification ကိုအသုံပြုနိုင်ပါသေးသည်။ အောက်ပါပုံကိုကြည့်ပါ။
၎င်းတွင် မိမိ E-mail သို့ အသုံးပြုရန်ဝင်ရောက်သည့်အခါတိုင်းတွင် Password အပြင် Verification code ပါလိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို မိမိ၏ဖုန်းသို့ Google မှ Text Message ဖြင့်ပေးပို့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရရှိလာသော Code ကိုအသုံးပြု၍ ဝင်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင်း ၎င်းကို2Step Verification ဟုခေါ် ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို စတင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် Get Started ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုအခါ မိမိ Account Password ကိုပြန်လည်တောင်းခံလာပါက ထည့်ပေးပါ။ ၎င်းနောက် Phone Setup လုပ်ငန်းစဉ် စတင်ပါလိမ့်မည်။ အောက်ပါပုံကို ကြည့်ပါ။
Phone Setup 1
၎င်းတွင် မိမိအသုံးပြုနေသည့် ဖုန်းနံပါတ်ကို ရေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ Code ရယူလိုသည့် နည်းလမ်းကို ရွေးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Text Message ကိုရွေးပြီး Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ထိုအခါတွင် Google မှ Phone Verification အလုပ်လုပ်ခြင်း ရှိမရှိကို စမ်းသပ်သည့်အနေဖြင့် မိမိ၏သတ်မှတ်ထားသော Phone သို့ Code ကို Message ဖြင့်ပေးပို့လိုက်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို သတ်မှတ်ထားသော နေရာတွင် ရိုက်ထည့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Phone Setup 2
Code ကို ရိုက်ထည့်ပေးပြီးပါက Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Phone Setup 3
ထိုအခါ Verification လုပ်ငန်းစဉ်အောင်မြင်ပြီဖြစ်သဖြင့် Turn On ကို နှိပ်ပြီး ဖွင့်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
3. Check activities
မိမိ လုပ်ဆောင်ချက်များ ၊ Gmail သို့ဝင်ရောက်ခဲ့မှုများစသည့် Activity များကိုလည်း Check လုပ်ရန် လိုအပ် ပါက Account Setting Page ရှိ My Activity တွင်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသေးသည်
၎င်း ကဏ္ဍတွင် ရက်စွဲအလိုက် မိမိ Account ဖြင့် Sign in ဝင်ရောက်ခဲ့မှု အခြေအနေများအပြင် အခန်းကဏ္ဍများခွဲခြားထားပြီး မိမိအသုံးပြုခဲ့ခြင်းများ၊ ရှာဖွေခဲ့ခြင်းများ၊ Play Store ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ You Tube ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Google မှ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် Products များအားလုံးကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။၎င်း ကဏ္ဍတွင် ရက်စွဲအလိုက် မိမိ Account ဖြင့် Sign in ဝင်ရောက်ခဲ့မှု အခြေအနေများအပြင် အခန်းကဏ္ဍများခွဲခြားထားပြီး မိမိအသုံးပြုခဲ့ခြင်းများ၊ ရှာဖွေခဲ့ခြင်းများ၊ Play Store ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ You Tube ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Google မှ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် Products များအားလုံးကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အတွက် မိမိအမှန်တက်ယ်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ရှိမရှိ သိရှိနိုင်မည့်အပြင် လိုအပ်ပါက ထပ်မံ၍ လုံခြုံစိတ်ချရသော အစီအမံများကို ချမှတ်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသော ကဏ္ဍများကိုလည်း ဝင်ရောက် လေ့လာကြည့်သင့်ပါကြောင်း။
(PHYO Training Institute)
"ဈေးကွက်အတွင်းမှ Customers အမျိုးအစားများနှင့် Complaints ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံ နည်းလမ်းများ"
Customers များ၏ ဝယ်ယူမှုပုံစံ ( Buying Behaviour )
" ထိရောက်သော ကြော်ငြာ Post ဖြစ်ဖို့... "
© 2020 Copyright by PHYO Training Institute